“Street Dance of China 3” မှာ Mentor တှအေဖွဈ တူတူတှရေ့မယျ့ EXO’s Lay, GOT7’s Jackson နဲ့ UNIQ’s Wang Yibo | News Bar Myanmar
ပရိသတျတှကေတော့ ဒီသူငယျခငျြး ၃ ယောကျကို အတူတူတှရေ့ဖို့ အရမျးကို စိတျလှုပျရှားနကွေပါပီနျော။ Youku က ” Street Dance of China 3″ ရဲ့ mentor တှကေို ကွညောပီးတဲ့နောကျမှာတော့ ပရိသတျတှဟော ဒီ သူငယျခငျြး ၃ ယောကျရဲ့ အစှမျးပွမှုတှကေို မွငျရဖို့ ရငျခုနျမှု အထှဋျအထိတျ ရောကျနကွေပါပီတဲ့။
Youku က မကွာသေးတဲ့ရကျတှကေ ” Street Dance of China3” ရဲ့ mentor တှကေို EXO ရဲ့ Lay ကစလို့ တဈယောကျခငျြးစီ အတညျပွုခဲ့တာပါ။ မွငျသူတှေ မှငျသတျရမယျ့ ရုပျရညျတှနေဲ့ သူမတူတဲ့ အရညျအခငျြးတှရှေိတဲ့ သူတို့ ၃ ယောကျကတော့ ” Street Dance of China3” မှာ ဘယျလိုအပွိုငျကွဲကွမလဲဆိုတာတော့ အရမျးကို စိတျဝငျစားစရာကောငျးနပေါပီ။
“Street Dance of China3” ဆိုတာ အနုပညာရှငျ Mentor တှေ ဦးဆောငျတဲ့ အဖှဲ့တှေ အက အရညျအခငျြး ယှဉျပွိုငျရတဲ့ အစီအစဉျတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။ ယခုကတော့ တတိယမွောကျ season ဖွဈပါတယျ။ ” Street Dance of China 3″ ကို ယခု ၂၀၂၀ ဇူလိုငျလမှ စတငျ ထုတျလှငျ့ပွသသှားမယျလို့ကွညောထားပါတယျ။
အားလုံးလညျး Lay, Jackson နဲ့ Wang Yibo တို့ ဘယျလို အရညျအခငျြးတှေ ပွကွမယျ ဘယျလို friendship moment တှေ တှမွေ့ငျရမယျဆိုတာကို ရငျခုနျနကွေပီမလား… ?
(Zawgyi) “Street Dance of China 3” မှာ Mentor တွေအဖြစ် တူတူတွေ့ရမယ့် EXO’s Lay, GOT7’s Jackson နဲ့ UNIQ’s Wang Yibo
ပရိသတ်တွေကတော့ ဒီသူငယ်ချင်း ၃ ယောက်ကို အတူတူတွေ့ရဖို့ အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါပီနော်။ Youku က ” Street Dance of China 3″ ရဲ့ mentor တွေကို ကြေညာပီးတဲ့နောက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေဟာ ဒီ သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်ရဲ့ အစွမ်းပြမှုတွေကို မြင်ရဖို့ ရင်ခုန်မှု အထွဋ်အထိတ် ရောက်နေကြပါပီတဲ့။
Youku က မကြာသေးတဲ့ရက်တွေက ” Street Dance of China3” ရဲ့ mentor တွေကို EXO ရဲ့ Lay ကစလို့ တစ်ယောက်ချင်းစီ အတည်ပြုခဲ့တာပါ။ မြင်သူတွေ မှင်သတ်ရမယ့် ရုပ်ရည်တွေနဲ့ သူမတူတဲ့ အရည်အချင်းတွေရှိတဲ့ သူတို့ ၃ ယောက်ကတော့ ” Street Dance of China3” မှာ ဘယ်လိုအပြိုင်ကြဲကြမလဲဆိုတာတော့ အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါပီ။
“Street Dance of China3” ဆိုတာ အနုပညာရှင် Mentor တွေ ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့တွေ အက အရည်အချင်း ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုကတော့ တတိယမြောက် season ဖြစ်ပါတယ်။ ” Street Dance of China 3″ ကို ယခု ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လမှ စတင် ထုတ်လွင့်ပြသသွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။
အားလုံးလည်း Lay, Jackson နဲ့ Wang Yibo တို့ ဘယ်လို အရည်အချင်းတွေ ပြကြမယ် ဘယ်လို friendship moment တွေ တွေ့မြင်ရမယ်ဆိုတာကို ရင်ခုန်နေကြပီမလား… ?
Next ကိုရီးယားအနုပညာလောကရဲ့ ကွောငျတောငျတောငျအနိုငျဆုံး ကောလဟာလ သတငျးအမှားမြား »
Previous « တခြိနျက နာမညျကွီးခဲ့သော The Great Queen Seon Deok ဇာတျလမျးတှဲကို ပွနျလညျလှမျးဆှတျခွငျး